बिचित्र संसार एमाले हाम्रो हो, केपी ओली पार्टी छाडेर गए हुन्छ – माधव नेपाल – Suchana Sanjal
बिचित्र संसार एमाले हाम्रो हो, केपी ओली पार्टी छाडेर गए हुन्छ – माधव नेपाल
प्रकाशित मिति: बुधबार, चैत्र ११, २०७७ समय: २०:३२:३२
अनुशासन उल्लंघन गरेको भन्दै १० बुँदे स्पष्टीकरण पत्र काटेपछि नेकपा एमालेका नेता माधवकुमार नेपाल पार्टी नेतृत्वप्रति अझ आक्रामक देखिएका छन् । स्पष्टीकरणले नतर्सने भन्दै उनले जनवर्गीय संगठनसँगै जिल्ला कमिटीहरुको भेला गर्ने बताए ।
एमाले अध्यक्ष ओली पक्षीय नेताहरु मात्र सहभागी ७ चैतको केन्द्रीय कमिटी बैठकले नेपालसहित नेताहरु भीम रावल, घनश्याम भुसाल र सुरेन्द्र पाण्डेसँग स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको थियो । महासचिव ईश्वर पोखरेलले सोमबार पठाएको पत्रमा नेता नेपालमाथि १० बुँदे आरोप लगाएका छन् र तीनदिनभित्र स्पष्टीकरण दिन भनिएको छ ।
त्यसको भोलिपल्ट मंगलबार नेपाल समूहसम्वद्ध विद्यार्थीहरुले गरेको अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलामा वरिष्ठ नेता नेपाल प्रमुख अतिथि थिए । नेपाल समूहका भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे, गोकर्ण विष्ट लगायतका नेताहरु उपस्थित भेलालाई सम्बोधन गर्दै उनले ‘कथित स्पष्टीकरण’बाट नतर्सिने
मंगलबार मात्र एक नेताले आफूलाई भेटेर ‘कमरेड केपी ओलीसँग मिल्नुस्, जेजे कारबाही नै गरे पनि सहिदिनुस्’ भनेको भन्दै उनले सहभागीहरुलाई प्रश्न गरे, ‘के हामी घुँडा टेक्ने बाटोमा जाने हो ? आत्मसमर्पणको बाटोमा जाने हो ? केपी ओलीको टाङमुनि छिर्ने बाटोमा जाने हो ?’
(हलबाट होइन भन्ने चर्को अवाज आयो) उनले पनि भने, ‘यो हामीलाई किमार्थ मन्जुर छैन । केपी ओलीको यो कथित स्पष्टीकरणबाट हामी तर्सिएका छैनौं, आतंकित भएका छैनौं । त्यसको सामना गर्न तयार छौं ।’
तत्कालीन राजा वीरेन्द्र, राजा ज्ञानेन्द्रका साथै कांग्रेसका नेताहरुसँग डिल गरेको, विदेशीका दबावसामु नझुकेको र पार्टीमा आएका हरेक सामस्या सामना गरेरआफू यहाँसम्म आएको भन्दै उनले भने, ‘कस्ता कस्ता कहाँ आए, केपी ओली मेरो सामुन्नेमा । केपी ओलीसँग लड्नु ठूलो कुुरा होइन ।’
‘यिनका चुरीफुरीहरु प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्दासम्म मात्र हो । जब प्रधानमन्त्रीको कुर्सीबाट सडकमा उत्रिनेछन्, केपी ओली प्रवृत्तिको हावा खुस्किनेछ ।’
२२ सालमा राजनीतिमा होमिएको आफू बाधा पन्छाउँदै नदी अगाडि बढेजस्तै अगाडि बढेको उनले सुनाए ।
यो ठाउँसम्म आउन साथ दिएको भन्दै केही नेताको नाम लिए । कतिले साथ छाडेको भन्दै उनले भने, ‘ठाउँमा पुर्‍याइएकाले धोका दिएकाहरु पनि सम्झिइरहेको छु ।’
नेता नेपालले अघि भने, ‘हामी तर्सिएका छैनौं, मैदान छोडेर भाग्ने वाला पनि छैनौं । पार्टी पनि फुटउँदैनौं । पार्टी फुटाउँछन् भने केपी ओलीले फुटाउँछन् ।’
Last Updated on: March 24th, 2021 at 8:32 pm